Nestlé NaturNes Bio Pear 90gr - ASFO Store
Save € 0,28
NaturNes Bio Pera dia fomba iray azo entina hitondrana ny vokatry ny zanakao amin'ny toerana rehetra. Mety ho an'ny zazakely 4 volana sy amin'ny endrika 90g miaraka amin'ny voankazo voajanahary, maniry ary voafantina manokana ho an'ny sakafon'ny zaza.
Safidy mety indrindra hanombohana fampidirana voankazo amin'ny famahanana zaza ary ny endrika fonosana dia ahafahanao mitondra azy hatraiza hatraiza. Ny fonosana dia natao manokana hamporisihana ireo zazakely antitra hianatra hihinana voankazo irery avy ao anaty fonosana. Namboarina amina voankazo voajanahary voajanahary, voafantina ary voafantina manokana ho an'ny famahanana zaza ary tsy misy loko na preservatives *.
Ny fonosana dia fomba voalanjalanja sy azo ampiharina mba hanomezana tombony ny voankazo amin'ny zanakao, amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza. Miaraka amin'ny voankazo 100% tsy misy siramamy nampiana, izay misy siramamy voajanahary fotsiny. Isaky ny fonosana NaturNes Bio dia mitovy amin'ny iray amin'ny voankazo, manolotra firafitra malefaka be sy tsiro matsiro hanomezana fahafaham-po ireo felatanana mahay manavaka indrindra!
Miaraka amin'ny fanoloran-tena hanome ireo akora voajanahary biolojika, voankazo novolavola ho an'ny Baby NaturNes Bio Pear, vita tamin'ny puree pear, 100% fiaviana biolojika.
Tsy ny biolojika ihany, fa ny zaza biolojika.
- voankazo 100% fiaviana biolojika.
- voankazo kalitao voalohany, indrindra ambolena sy voafantina ho an'ny sakafon'ny zaza.
- Tsy misy siramamy nampiana. Ny siramamy voajanahary voajanahary fotsiny no ao aminy.
- Tsy misy loko na preservatives na tsiro artifisialy.
- Smart FlowTM & ndash; Fantsom-baovao vaovao mifehy ny fivoahan'ny fivoahana, mamela ny fizakan-tena sy fahatokisan-tena bebe kokoa ho an'ny zanakao.
Soeda Hongria fanjakana mitambatra Pays-Bas --- Afghanistan Aland Islands Albania Alzeria Andorra Angola Anguilla Antigua & Barbuda Arzantina Armenia ao Aruba Aostralia Aotrisy Azerbaijan Bahamasy Bahrain Bangladesy Barbados Belarosia Belzika Belize Benin Bermudes Bhutan Bolivia Bosnia & Herzegovina Botsoana Bouvet Island Brezila British Indian Ocean Territory British Virgin Islands Broney Bolgaria Borkina Faso Burundi Kambodza Kamerona Kanada Cape Verde Caribbean Netherlands Cayman Islands Repoblikan'i Afrika Afovoany Tchad Shily Shina Krismasy Island Cocos (Keeling) Nosy Kolombia Comores Congo - Brazzaville Congo - Kinshasa Nosy Cook Costa Rica Kroasia Curaçao Sipra Tseky Côte d'Ivoire Danemark Djibouti Dominica Repoblika Dominikanina Ekoatera Ejipta El Salvador Ginea Ginea Eritrea Estonia Eswatini Ethiopia Nosy Falkland Faroe Islands Fidji Failandy Frantsa Guyane Pôlinezia frantsay French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Gresy Groenlandy Grenady Goadelopy Guatemala Guernsey Ginea Guinée-Bissau Goiana Haiti Heard & McDonald Islands Honduras Hong Kong SAR Hongria Islandy India Indonezia Irak Irlandy Isle of Man Isiraely Italia Jamaika Japana Jersey Jordania Kazakhstana Kenya Kiribati Kosovo Koety Kyrgyzstan Laos Letonia Libanona Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Litoania Luxembourg Macao SAR Madagasikara Malawi Malezia Maldives Mali Malta Martinique Maoritania Maorisy Mayotte Meksika Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Maraoka Mozambika Myanmar (Birmania) Namibia Nauru Nepal Pays-Bas New Caledonia Novely zelandy Nicaragua Niger Nizeria Niue Norfolk Island Makedonia avaratra Norvezy Oman Pakistan Palestiniana Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Però Filipina Pitcairn Islands Polonina Portiogaly Qatar fihaonana Romania Rosia Rwanda Samoa San Marino São Tomé & Príncipe Arabia Saodita Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten Slovakia Slovenia Nosy Salomon Somalia Afrika Atsimo Nosy South Georgia & Atsimo-Sandwich Atsimo Korea Atsimo Sodàna Atsimo Espaina Sri Lanka St. Barthélemy St. Helena St. Kitts & Nevis St. Lucia St. Martin St. Pierre & Miquelon St. Vincent sy Grenadines Sodàna Suriname Svalbard & Jan Mayen Soeda Soisa Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad & Tobago Tonizia vorontsiloza Turkmenistan Nosy Turks & Caicos Tuvalu US Outlying Islands Oganda Ukraine Emirà Arabo Mitambatra fanjakana mitambatra Etazonia Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezoela i Vietnam Wallis & Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbaboe